सावधान् ! फेरी देखा पर्यो बर्डफ्लु ।। « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
द आर्ट अफ लिभिङ धरानद्वारा धरानका दैनिक गरी खाने वर्गलाई खाद्यान्न सहयोग
जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापालाई पदमुक्त (आदेशसहित)
थप २,९१८ जना नयाँ संक्रमित थपिए, ५३ को मृत्यु
सौर्न्दर्यताले भरिएको देशमा चुरे दोहन किन रोकिएन एमाले नेता यादव
आँचलले निशा घिमिरेलाई एक लाख सहयोग गर्ने
सावधान् ! फेरी देखा पर्यो बर्डफ्लु ।।
May 18, 2018 मा प्रकाशित
सैघाली खबर/चितवन, ४ जेठ।
चितवनमा बर्डफ्लु देखापरेको छ । जिल्लाको खैरहनी नगरपालिका–९ सुर्तनीका स्थानीय किसान राजन चौधरी र लक्ष्मण चौधरीले पालेको कुखुरामा बर्डफ्लु (एभिएन इन्फ्लुएन्जा एच फाइभ एन वान) देखिएको हो । राष्ट्रिय पक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला भरतपुरका प्रमुख डा दयाराम चापागाईंले केही दिनअघि परीक्षणका लागि केन्द्रीय प्रयोगशालामा पठाइएकामा वैशाख ३१ गते बर्डफ्लु प्रमाणित भएको बताए ।
बिहीबारको मन्त्रिस्तरको निर्णयपछि शुक्रबार फार्म र आसपासका क्षेत्रमा रहेका कुखुरा र हाँस मार्ने काम भइरहेको उनले बताए । राजनको फार्ममा पालिएका एक हजार ५०० र लक्ष्मणको फार्ममा पालिएका एक हजार लेयर्स कुखुरा रोगले मर्न थालेपछि परीक्षणका लागि पठाइएको थियो । सँगै रहेका ती दुवै फार्मका सबै कुखुरा मरिसकेको चापागाईंले बताए ।
खोरमा रहेका कुखुरा धमाधम मर्न थालेपछि यही वैशाख १४ गते जाँचका लागि भरतपुरमा रहेको राष्ट्रिय पक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला ल्याइएको थियो । परीक्षणमा एच फाइव एन वान (एभिएन इन्फ्लुएन्जा) नामक जीवाणु (भाइरस) भेटिएको चापागाईंले बताए । त्यस पश्चात् केन्द्रीय प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि नमूना पठाइएको थियो ।
केन्द्रीय प्रयोगशालाले वैशाख ३१ गते बर्डफ्लु प्रमाणित गरेर पठाएको थियो । यसैबीच बर्डफ्लु पुष्टि भएपछि खैरहनी–९ सुर्तनीको केही भागलाई संक्रमित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । उक्त क्षेत्रमा पक्षी तथा पक्षीजन्य पदार्थको ओसारपसारमा पनि रोक लगाइएको छ भने त्यस क्षेत्रमा रहेका पंक्षी सुरक्षितरुपमा नष्ट गरिएको छ । यसैबीच पशु सेवा कार्यालयले कुखुराको खोर सफा गर्न अनुरोध गरेको छ । यो जीवाणु मानिसमा पनि सर्न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणसमक्ष पनि कार्यालयले आग्रह गरेको छ ।
यसअघि २०७० सालमा जिल्लामा बर्डफ्लु देखिएको थियो । सो समयमा बर्डफ्लुका कारण ठूलो संख्यामा कुखुरा मरेका थिए । नेपालको सीमा क्षेत्र भारतमा यस वर्ष पनि बर्डफ्लु देखा परेपछि नेपालमा उच्च सतर्कता अपनाइएको भए पनि बर्डफ्लु देखिएको हो । कुखुराजन्य क्षेत्रमा नेपालमा ७० अर्बभन्दा बढी लगानी छ । जसमध्ये आधाभन्दा बढी लगानी चितवनमा छ ।।
काठमाडौंमा रोकिएको कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान शुरू
नेता खनाल ‘अक्सिजनको सपोर्टमा’, यस्तो छ उनको अबस्था ?
गर्मीमा स्वस्थ रहन जान्नैपर्ने कुराहरु : गर्मी मौसममा के खाने के नखाने ?
रक्तदान गर्न कसले हुने, कसले नहुने?
झलनाथ खनालको स्वास्थ्यमा समस्या, नर्भिक अस्पताल भर्ना